ပေါ့ဘာရဲ့ အနာဂတ် မန်ယူအသင်းမှာပဲ ရှိနေတော့မလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ
ပေါ့ဘာ Pogba ကိုခေါ်ယူလိုတဲ့ အသင်းတွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာစကားကိုပြောခဲ့တဲ့ ရွိုင်အိုလာ Raiola
6 Oct 2018 . 8:48 PM
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေဟာ ကပ်ဆိုးတစ်ခုထဲကို ရောက်နေသလိုပါပဲ။ ဘုတ်အဖွဲ့  ၊ နည်းပြနဲ့ နောက်ဆုံးကစားသမားတွေ အားလုံးမှာ ပြဿနာ ကိုယ်စီရှိနေကြတာပါ။ ဒီအထဲမှာမှ ပေါ့ဘာ Pogba နဲ့ နည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho တို့ရဲ့ ပြဿနာဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာနဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီထဲက ပြဿနာလေးတွေ ရှိခဲ့ကြပြီး ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ ပြဿနာရဲ့ အစိုင်အခဲက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။ လက်ရှိမှာ ပေါ့ဘာကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် အသင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ PSG တို့က အသည်းအသန်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ အေးဂျင့် ရွိုင်အိုလာ ပြောခဲ့တဲ့စကားကတော့ ဒီအသင်းတွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွိုင်အိုလာ က ” ကျွန်တော် ပေါ့ဘာရဲ့ အကြောင်းမပြောရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူက ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ သူရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Photo: Goal.com , Evening Standard
ပေါ့ဘာ Pogba ကိုချေါယူလိုတဲ့ အသငျးတှအေတှကျ စိတျပကျြစရာစကားကိုပွောခဲ့တဲ့ ရှိုငျအိုလာ Raiola
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ လကျရှိအခွအေနတှေဟော ကပ်ဆိုးတဈခုထဲကို ရောကျနသေလိုပါပဲ။ ဘုတျအဖှဲ့ ၊ နညျးပွနဲ့ နောကျဆုံးကစားသမားတှေ အားလုံးမှာ ပွဿနာ ကိုယျစီရှိနကွေတာပါ။ ဒီအထဲမှာမှ ပေါ့ဘာ Pogba နဲ့ နညျးပွမျောရငျဟို Mourinho တို့ရဲ့ ပွဿနာဟာလညျး တဈခုအပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပေါ့ဘာနဲ့ မျောရငျဟိုတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီထဲက ပွဿနာလေးတှေ ရှိခဲ့ကွပွီး ဒီနှဈဘောလုံးရာသီမှာတော့ ပွဿနာရဲ့ အစိုငျအခဲက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ကွီးထှားလာခဲ့တာပါ။ လကျရှိမှာ ပေါ့ဘာကို ချေါယူဖို့အတှကျ အသငျးကွီးတှဖွေဈကွတဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ PSG တို့က အသညျးအသနျဖွဈနကွေပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ အေးဂငျြ့ ရှိုငျအိုလာ ပွောခဲ့တဲ့စကားကတော့ ဒီအသငျးတှအေတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ရှိုငျအိုလာ က ” ကြှနျတျော ပေါ့ဘာရဲ့ အကွောငျးမပွောရတာကို ပိုနှဈသကျပါတယျ။ လကျရှိမှာ သူက ထိခိုကျလှယျတဲ့ အနအေထားမှာရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျထဲမှာတော့ သူရှိနမှောမဟုတျပါဘူး ” လို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Ko Kyue . 28 mins ago